MB 2016 Febroary - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Febroary
Milaza ny Soratra Masina fa “nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra toa antsika i Jesosy, nefa tsy nanota” (Hebreo). 4,15). Io fahamarinana manan-danja io dia hita taratra ao amin’ny foto-pampianarana kristiana ara-tantara, izay araka ny niasan’i Jesosy, tamin’ny nahatongavany ho nofo, dia toy ny hoe mpisolovava.
Ny teny latinina vicarius dia midika hoe "mitondra solontena na governora ho an'ny olona iray". Tamin’ny fahatongavany ho nofo dia tonga olombelona ilay Zanak’Andriamanitra mandrakizay sady niaro ny maha-Andriamanitra Azy. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia niresaka momba ny "fanakalozana mahagaga" i Calvin. TF Torrance dia nampiasa ny teny hoe fanoloana: “Tamin’ny fahatongavany ho nofo ny Zanak’Andriamanitra dia nanetry tena, nisolo toerana antsika ary nametraka ny tenany teo anelanelantsika sy Andriamanitra Ray, ary noho izany dia nitondra teo Aminy ny henatra sy ny fanamelohana antsika rehetra - fa tsy toy ny olon-kafa. , fa amin’ny maha-Andriamanitra mihitsy” (Atonement [Sorompanavotana], p. 151). Ao amin'ny bokiny iray, Chris Kettler namantsika dia miresaka momba ny "fifandraisana matanjaka eo amin'i Kristy sy ny maha-olombelona antsika amin'ny haavon'ny fisiantsika, ny ontolojika", izay hazavaiko eto ambany.
Miaraka amin'ny maha-olombelona isoloany azy, Jesosy dia mijoro ho an'ny olombelona rehetra. Izy no Adama faharoa izay ambony lavitra noho ny voalohany. Misolo tena antsika, Jesosy dia natao batisa teo amin’ny toerantsika – ilay tsy nisy ota ho solon’ny olombelona mpanota. Ny batisantsika àry dia fandraisana anjara amin’ny azy. Jesosy dia nohomboana ho antsika ary maty hamonjy antsika mba ho velona isika (Romana 6,4). Ary avy eo ny fitsanganany avy tao am-pasana, izay nahavelomany antsika koa (Efesiana). 2,4-5). Izany dia narahin’ny fiakarany ho any an-danitra, izay nanomezany antsika toerana ho eo anilany amin’ny fanjakana any (Efesiana). 2,6; Baiboly Zurich). Izay rehetra nataon’i Jesosy dia nataony ho antsika fa tsy ho antsika. Anisan’izany ny fakam-panahy nataony ho antsika.
Mampahery ahy ny mahafantatra fa ny Tompontsika dia niatrika ireo fakam-panahy niatrika ahy - ary nanohitra azy ireo ho ahy, ho ahy. Ny fiatrehana sy ny fanoherana ny fakam-panahy dia iray amin'ireo antony nahatonga an'i Jesosy nankany an'efitra taorian'ny batisany. Na dia nasian'ny fahavalo azy teo aza izy dia nijoro tsara. Izy no mpandresy - amin'ny anarako, eo amin'ny toerako. Ny fahatakarana izany dia mahatonga izao tontolo izao misy fahasamihafana!
Indray andro aho nanoratra momba ny krizin'ny maha-olona izay lalovan'ny maro. Tamin'ny fanaovana izany dia nikasika fomba telo tsy mahasoa izay matetika fantatry ny olona aho: tsy maintsy nanohitra. Tamin'ny asany solontenan'ny olombelona, ​​dia nihaona sy nanohitra azy teo amin'ny toerantsika izy. “Noho ny amintsika sy ho solon’ny tenantsika, Jesosy dia niaina izany fiainana isoloana tena izany tamin’ny fahatokiana tanteraka an’Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny fahatsarany” (Incarnation, p. 125). Nanao izany ho antsika Izy tamin’ny fahazoana antoka mazava tsara hoe iza Izy: Zanak’Andriamanitra sy Zanak’olona.
Mba hahafahana manohitra ny fakam-panahy amin'ny fiainantsika dia zava-dehibe ny fahalalana hoe iza marina isika. Amin'ny maha mpanota novonjen'ny fahasoavana antsika dia manana toetra vaovao isika: rahalahintsika sy rahavavin'i Jesosy malala isika, zanaka malalan'Andriamanitra. Tsy toetra tokony hananantsika izany ary azo antoka fa tsy toetra iray izay azon'ny hafa omena antsika. Tsia, nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alàlan'ny fahatongavan'ny nofo ho nofo ho an'ny Zanany. Ny hany ilaintsika dia ny fahatokisana azy mba hahatongavany amin'ny tena toetrany amintsika mba handraisantsika io mombamomba vaovao avy aminy io amin'ny fankasitrahana lehibe.
Manovo hery isika amin'ny fahalalana fa fantatr'i Jesosy ny fomba hiatrehana ny fitaky ny fakam-panahy maloto nefa mahery nataon'i Satana momba ny natiora sy ny loharanon'ny tena maha-izy antsika. Rehefa entin'ny fiainana ao amin'i Kristy isika, dia miaiky fa azo antoka fa io toetra io no nanjary nihanalemy sy nihanalemy kokoa izay naka fanahy antsika taloha ka nahatonga antsika hanota. Amin'ny fanaovana ny tena maha-izy antsika ary mamela azy io hamokatra eo amin'ny fiainantsika dia mahazo tanjaka isika, satria fantatsika fa voajanahary ao amintsika izany amin'ny fifandraisantsika amin'ilay Andriamanitra telo izay iray, izay mahatoky sy feno fitiavana antsika sy ny zanany.
Raha tsy matoky ny tena maha-izy antsika anefa isika, dia mety hampihemotra antsika ny fakam-panahy. Mety hisalasala isika amin’izay ny maha-Kristianina antsika na ny fitiavan’Andriamanitra antsika tsy misy fepetra. Mety hirona hino isika fa ny fakam-panahy dia mitovy amin’ny fialan’Andriamanitra amintsika tsikelikely. Fanomezana malala-tanana ny fahalalana ny tena maha-izy antsika amin’ny maha-zanak’Andriamanitra malalantsika azy. Afaka mahatsapa ho voaro isika noho ny fahalalana fa Jesosy tamin'ny fahatongavany ho nofo ho antsika - fa tsy antsika - dia nahatohitra ny fakam-panahy rehetra. Noho ny fahafantarana izany, raha manota isika (izay tsy azo ihodivirana), dia afaka mitsangana tampoka indray isika, manao fanitsiana ilaina ary matoky fa hampandroso antsika Andriamanitra. Eny, rehefa miaiky ny fahotantsika isika ka mila famelan-keloka avy amin’Andriamanitra, dia izany no famantarana ny fijoroan’Andriamanitra eo anilantsika tsy misy fepetra sy amim-pahatokiana. Raha tsy izany no zava-misy, ary raha tena nanadino antsika tokoa Izy, dia tsy hitodika any aminy intsony isika amin’ny alalan’ny sitrapontsika manokana mba hanaiky ny fahasoavany malala-tanana ka hiaina fanavaozana noho ny fanekeny, izay mihaona amin’ny sandry misokatra. Andeha isika hampitodika ny masontsika amin’i Jesosy, izay nalaim-panahy tamin’ny lafiny rehetra toa antsika ka tsy resin’ny ota. Aoka isika hatoky ny fahasoavany sy ny fitiavany ary ny heriny. Ary aoka isika hidera an’Andriamanitra satria Jesosy Kristy no nandresy ho antsika tamin’ny fahatongavany ho nofo.
Teraka tamin'ny fahasoavany sy ny fahamarinany,